कुलमान घिसिङ विरुद्धको मोर्चाबन्दी असफल, उद्योगीले ४ अर्ब ३० करोड तिर्नैपर्ने ! - Maxon Khabar
Home / News / कुलमान घिसिङ विरुद्धको मोर्चाबन्दी असफल, उद्योगीले ४ अर्ब ३० करोड तिर्नैपर्ने !
कुलमान घिसिङ विरुद्धको मोर्चाबन्दी असफल, उद्योगीले ४ अर्ब ३० करोड तिर्नैपर्ने !
व्यापारी उद्योगी ले ट्रङ्क तथा डेटिकेटेड लाइनको बक्यौता तिर्नैपर्ने भएको छ । उद्योगी व्यापारीले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत उपभोग गरेको बिजुलीको भुक्तानी गर्नुपर्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णयलाई पाटन उच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ ।